Andro: 23 Oktobra 2019
Ny seranam-piaramanidina any Torkia, ny Janoary tamin'ity taona ity-fotoana Septambra ampiasaina arivo tapitrisa 161 259 453 mpandeha lavitra. 22 isan-jaton'ny mpandeha no nampiasa ny seranam-piaramanidina Istanbul. 9 isam-bolana ao amin'ny seranam-piaramanidina Istanbul [More ...]
Fiovana nomerika ao amin'ny KARDEMİR
Karabük Iron and Steel Industry and Trade Inc. (KARDEMIR), rafi-pandrafetana ny rafi-pandrafetana orinasam-pifandraisana (ERP) SAP R3, rafitra SAP S / 4 HANA manavao ny filàn'ny tetik'asa fanovana nomerika. [More ...]
Inona avy ny fepetra amin'ny fampiasana ny karatra famandrihana ny mpianatra?
Inona avy ny fepetra amin'ny fampiasana ny karatra famandrihana ny mpianatra? : Fampiharana ny kaominin'i Ankara Metropolitan dia manao ny fampiharana ny karatra famandrihana ho an'ny mpianatra. 20 nanomboka tamin'ny Oktobra ka hatramin'ny oktobra 2019 mpianatra izay latsaky ny 27 200 karatra 60 [More ...]
Nesorina ve ny satan'ny valan-javaboary Goreme Valley ho an'ny tetikasan'ny lalamby haingam-pandeha?
Niresaka taminay i Orhan Sarıaltun, Filohan'ny Chann of City Planners ary Tezcan Karakuş Candan, Filohan'ny Sampana Ankara ao amin'ny Chamber of Architects. Araka ny filazan'i Can Deniz Eraldemir avy amin'i Evrensel; [More ...]
Ny tanànan'i Mersin Metropolitan, mpamily bus 73 dia nahavita ny tafatafa taorian'ny fanambarana. Ao anatin'ireo rindranasa 1003 total, ny Kaomina Metropolitan dia hanofa ny mpamily 73, ao koa ny vehivavy. Olom-pirenena ao Mersin [More ...]
Ny fiara fitateram-bahoaka izay miasa manerana an'i Kocaeli dia nanomboka nivadika tsikelikely amin'ny rafi-panangonana elektronika Kocaeli Metropolitan Munisipaly (KentCard) nanomboka tamin'ny 2009. Mandeha fiaramanidina toy ny anao-mandeha miaraka amin'ny tetezamita mankany amin'ny rafitra KentCard [More ...]
Ohatra ny fitondran-tena amin'ny fitaterana entana any Antalya
Ny fifanakalozana fitateram-bahoaka dia Peace Sozen, ny mpizahatany Iraniana ao anaty bus ao amin'ny 30 an'arivony dolara vahiny ary TL natolotr'ilay tompon'ny kitapo. Ny mpizahatany Iraniana dia nisaotra ny mpamily noho ny fihetsik'izy ireo saro-pady. [More ...]
Fiarovam-pirinty voalohany eo an-toerana sy nasionaly ho an'ny fiara Metro izay novokarin'i Elsan A.Ş.
Istanbul, Ankara, Izmir, tanàn-dehibe indrindra eo amin'ny lalamby 12 nampiasa fitaterana ao am-pon'ny natiora "vahana maotera", ny voalohany teo amin'ny Torkia Elsen Inc. Navoakan'i. Tiorkia voalohany mpanamboatra ny elektrika Motors EMTask [More ...]
Assoc. Dr. Fitsidihan'i Pelin Alpkökin ny ESTRAM
Istanbul Metropolitan Municiel an'ny Departemantan'ny rafi-pitantanan'i Head Assoc Dr. Pelin Alpkökin dia nihaona tamin'ny Ben'ny tanàna Büyükerşen tao amin'ny Rafitra Rail Railway Eskişehir [More ...]
Nilaza ny minisitry ny indostria sy ny teknolojia Mustafa Varank, olarak Amin'ny maha ministera azy, manantitrantitra an'i Bursa izahay amin'ny hetsika ataontsika sy ny teknolojia. Bursa, ny fotodrafitrasa, orinasa iray amin'ireo tanàna lehibe indrindra afaka mandray anjara amin'ny zava-dehibe-nanampy ny famokarana ao Torkia. " [More ...]
Ny zava-maniry voalohany any Eoropa dia manisa andro
Minisitry ny Indostria sy ny Teknolojia Mustafa Varank, Oyak Renault, aluminium maotera vato voalohany tany Tiorkia, nilaza fa novokarina tao Avo Pressure tsindrona Aluminum Factory, "orinasa ity, ny Renault ny firenentsika sy ny maotera mifangaro ihany any Eoropa [More ...]
Ny sehatry ny indostrialy tsy miankina vaovao mba hampihenana ny 330 tapitrisa dolara dolara ankehitriny
Ny minisitry ny indostria sy ny teknolojia Mustafa Varank, Asil Celik ary Gemlik Fertilizer Gem, izay haorina any Bursa, dia nilaza hoe: ında Rehefa miasa avokoa ireo faritra roa ireo, ny sandan'ny kaonty ankehitriny dia mitentina $ 330 tapitrisa dolara isan-taona. [More ...]
Fiaran-dalamby Rosiana sy Serbia dia nanao sonia fifanarahana iray miaraka amin'i Montenegro (Bar) amin'ny fanatanterahana ny tetikasa hanitsiana ny zotra Belgrade - Vrbnica - sisin-dalamby. Filoha sy tompon'andraikitra ambony ao amin'ny lalamby rosiana [More ...]
Torkia ny toe-karena dia lasa ny tetezana ny sambo sy ny mandroaka ny fidiram-bola homarinana avy amin'ny Janoary-dia vanim-potoana Septambra 1 lalambe tapitrisa lavitrisa 434 504 391 arivo kilao. Raha ny antontan-kevitry ny Dirte générale de générale, 15 any Istanbul [More ...]
Ireo izay nanohitra ny toerana tao amin'ny distrikan'i Hasanpaşa tao Kırkpınar, dia nanomboka nanao fampielezan-kevitra amin'ny Internet i Sapanca. Ny tetikasa Teleferik, izay sahirana amin'ny fandaharam-potoanan'ny faritany misy tato ho ato, dia mbola mitazona ny hafanan'izy ireo amin'ny fandaharana. Nikasa ny ho ik [More ...]
Voafidy ho Filohan'ny Birao Talen'ny Fikambanan'ny Angovo Ara-Angovo ny Komitin'ny Doğan Energy Burak Kuyan, izay nitana andraikitra lehibe tamin'ny fananganana varotra malalaka hatramin'ny nananganana azy. 2019 taona ao amin'ny Energy Trade Association [More ...]
Minisitry ny Turhan: Forum Forum Tbilisi Silk Road
Minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Cahit Turhan, praiminisitra lefitra ao Uzbekistan Elyar Ganiyev, minisitry ny fampandrosoana ara-toekarena sy maharitra Natia Turnava ary minisitry ny fitaterana any Afghanistan [More ...]
Torkia 17 145 Taona Nanao lavitrisa dolara atsy ho atsy Fotodrafitrasa Investment
Ny 3 mitohy dia misy any Tbilisi renivohitra. Raha niresaka tao amin'ny Forum Tbilisi Silk Road Forum dia nilaza i Turhan fa taorian'ny dingana fivoarana fanao isan-taona 30 dia nahatratra fatratra lehibe ny taham-barotra inter-kontinanta. Foibe ara-toekarena mahasarika [More ...]
Fiarovana amin'ny ambaratonga ambony miaraka amin'ny X-Ray ary Detector Door Metal ao Ankara Subway
Ny monisipaly Ankara Metropolitan dia mitohy hatrany ny fepetra raisina ho loha laharana ny fiarovana ny mpandeha amin'ny fitaterana olona. Ny monisipaly Metropolitan, X-Ray ary Metal dia eo amin'ny fidirana amin'ny rafi-pitaterana Rail (ANKARAY sy Metro Stations) arahi-maso isan'andro amin'ny fakan-tsary fiarovana. [More ...]
Ny maodelim-pitaterana iraisan'ny EKOL dia mahazo ny loka maharitra
Ekol dia nomena tamin'ny sokajy fitantanana karbona ao amin'ny 2019 Sustainable Business Awards nokarakarain'ny Sustainability Academy ho an'ny maodely fitaterana antonona azy, izay nanana anjara toerana lehibe tao amin'io sehatra io. Nandritra ny Sustainable Business Awards dia eken'ny Akademia i Ekol. [More ...]